Ngopy Online: contoh surat lamaran kerja lengkap dengan riwayat hidup
contoh surat lamaran kerja lengkap dengan riwayat hidup Izikhalazo kanye nemibuzo babangani esikushoyo kulabo abasebenzelana ngqo ukuqaliswa kwe- registration employess . Okwamanje singa ukunazisa ukuthi abaningi abaqalayo kwi kuleli saat2 kanzima kangaka ukuze singene site .
Sethemba ukuthi lezi izingqinamba kungenziwa yifayela izinhlangothi ezithintekayo , ngakho abangane bami abangakholwa ufisa ukubhalisa inthanethi ukuze uthole kwezihibe.
Enye into sidinga ukukhumbuza ukuthi ezimweni ezifana lokhu siqambe ukuba khona amaqembu ukuthi ukusebenzisa izwe ukusizakala . Ngakho-ke , akufanele wayethembele uma zikhona lezo ezinikeza isithembiso nanoma yini ehlobene nokubhaliswa inceku civil .
Kuhle , ikheli eligcwele kuhlanganise izinombolo zocingo kungukuthi ishicilelwe ngokukhululekile ngalolu sithangami ukugwema izinto asifuni .
Ngalokhu isicelo Ministry uNgqongqoshe Law and Human Rights of the Republic of Indonesia , ukuze ukwazi ukwamukela mina njengoba umfundi for Civil Izinceku ( CPNS ) endaweni ye- Republic of Indonesia .
Njengoba acabangele uNgqongqoshe noMthetho Ministry Human Rights lapha ngase ebengiyidinga ezinye izidingo kanje :
Copy of Last High School Diploma 1.Foto ngokomthetho
Copy of Isitifiketi 2.Foto computer
3.Foto Kopisha ID : 1 Sheet
Ikhophi 4.Foto of Ukuzalwa Isitifiketi : 1 ishidi
Ikhophi 5.Foto isitifiketi police uthi: 1lembar
6.Foto Copy of Ikhadi Family : 1 ishidi
Kopisha 7.Foto yellow card : 1 ishidi
Izithombe color 8.Pas 3X4 : 2 izicucu
Ngakho mina lilethe lesi sicelo kuNgqongqoshe Wezobulungisa Ministry Human Rights . Ukuze ukunakwa nokucabangela yakho ngithanda ukubonga uMnu
Diposting oleh Lisa Fernandez di 18.26